သစ်ကြံပိုးခေါက် (Cinnamon) အကြောင်း သိကောင်းစရာ - Hello Sayarwon
သစ်ကြံပိုးခေါက် ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
သစ်ကြံပိုးခေါက် ကို မှိုသတ်ဆေး၊ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး၊ ပိုးသတ်ဆေး၊ အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ အအေးမိခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ အစားသောက်ပျက်ခြင်း၊ နှင့် လေပြွန်ရောင်ခြင်းများကို ကုသရာတွင် လည်းကောင်း အသုံးပြုကြသည်။
အချို့သော သုတေသနများတွင် သစ်ကြံပိုးခေါက် အမျိုးအစားတစ်မျိုးသည် ဆီးချိုလူနာများတွင် သွေးထဲရှိ သကြားဓါတ်ကို ကျဆင်းစေကြောင်း တွေ့ရှိထားသည်။ သို့သော် အခြားသော လေ့လာမှုများတွင် အခြားအကျိုးများကို မတွေရှိပေ။ သွေးထဲရှိ ကိုလက်စထရောကျခြင်းနှင့် ခုခံအားကျဆင်းမှု ရောဂါလူနာများတွင် မှိုစွဲသောရောဂါများကို ကုသရန် လေ့လာထားသည်များသည်လည်း မပြည့်စုံလှပေ။
ဓါတ်ခွဲခန်း စမ်းသပ်မှုများတွင် သစ်ကြံပိုးခေါက်သည် ရောင်ယမ်းခြင်းကို သက်သာစေပြီး၊ ဓါတ်တိုးခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်သော အာနိသင်များရှိပြီး၊ ဘက်တီးရီးယားများကို သေစေနိုင်သည်ဟု တွေ့ရှိထားသည်။ သို့သော် လူများအတွက် မည်သို့ အသုံးပြုရမည်ကို မရှင်းလင်းပါ။
ဤဆေးပင်နှင့် ပတ်သတ်ပြီး လုံလောက်သော လေ့လာမှုများမရှိသော်လည်း ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန် ဆေးပင်ကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ သို့သော် သစ်ခေါက်သည် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းကို ဖြစ်စေသော ပိုးများကို သေစေကြောင်း အချို့သော လေ့လာမှုများက ပြဆိုထားသည်။
သစ်ကြံပိုးခေါက် အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
အေးပြီး ခြောက်သွေ့သောနေရာတွင် ထားပါ။
သစ်ကြံပိုးခေါက်အဆီကို အခြားအဆီတစ်ခုခုထဲတွင် ရောစပ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်သည်။
သုတေသနများစွာ မထွက်ပေါ်လာခင်တွင် သစ်ကြံပိုးခေါက်ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ၊ နို့တိုက်မိခင်များ နှင့် ကလေးများတွင် ဆေးကုသခြင်းအတွက် အသုံးမပြုသင့်ပေ။
• အစာအိမ်ရောင်ခြင်း၊ လျှာ၊သွားဖုံး ရောင်ခြင်း
• အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊ ဓါတ်မတည့်ခြင်း
• ဓါတ်မတည့်ခြင်းကို တုံ့ပြန်ခြင်း
သစ်ကြံပိုးခေါက် ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ ဘယ်လိုဓါတ်ပြုမှုတွေရှိလာနိုင်သလဲ
ဤဆေးပင်သည် အခြားသော သင်အသုံးပြုနေသော ဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများရှိနိုင်သည်။ အသုံးမပြုခင် ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးပင်ကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ ပိုးသတ်ဆေးများ၊ ဆီးချိုကျဆေးများ၊ သွေးကျဲဆေးများ၊ နှလုံးရောဂါဆေးများ၊ နှင့် အခြားသော ဆေးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများ ရှိနိုင်ပါသည်။
သစ်ကြံပိုးခေါက် အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
သစ်ကြံပိုးခေါက်မှုန့်ကို ဆီးချိုရောဂါအတွက် ပေးသောအခါ တစ်နေ့လျှင် ၁ ဂရမ်မှ ၁.၅ ဂရမ်အထိပေးလျှင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ တွေ့ရလေ့မရှိပါ။
Cinnamon. http://www.webmd.com/vitamins-and- supplements/lifestyle-guide- 11/supplement-guide- cinnamon.
Assessed August 7, 2016.
Cinnamon. http://www.drugs.com/npc/cinnamon.html. Assessed August 7, 2016Skidmore-Roth, Linda. Mosby’s Handbook Of Herbs & Natural Supplements. St. Louis, MO: Mosby, 2001. Print version.
Cinnamon. http://www.drugs.com/npc/cinnamon.html. Assessed August 7, 2016